Su'aal ku saabsan xundhurta ama xudunta?
Author Topic: Su'aal ku saabsan xundhurta ama xudunta? (Read 5432 times)
« on: August 03, 2013, 06:03:04 PM »
RAMADAAN KARIIM DHAMAAN SHAQAALAHA somalidoc
Walaalayaal waxaan qabaa laba suaalood oo ku saabsan caafimaadka.
1. Xundhurta ama xudunta oo xanuunaysa qof aan isku dhawnahay kana cabanaysa in mudo gaadhaysa 14cisho ah da'aduna tahay 22 jir. Taas oo xudhurtu keenaysco wax sida dheecaanka oo kale ah ama biyo oo kale ah oo ka socda xudunta ur aan ubadana leh runtii urtaas wax aan ku cabiri karo maleh waa ur badan. Midabkuna waa mar cad iyo mar huruuda xanuunbadan malaha laakiin urtaas ayaa badan. Dr. Maxaa keena ama keenikara? Malagayaabaa inuu xanuuno waaweyni keeniksraan? Laakiinse maxaa lagu daweeyaan?
2. Maxaa lagu daweeyaa ama lagula tacaalaa biysha ama manida raga oo yar? Dr. Biyaha raga maalinwalba utagaya xaaskiisa haday yar yihiin ma keenikartaa uur biyaha oo yar awgeed? Dr. Majiraa cuntooyin ama cabitaano badiya biyaha raga maalinwalba utaga dumarkooda? Caafimaad ahaan ma fiican tahay inaad naagtaada u tagtid halmar maalintii?
Re: Su'aal ku saabsan xundhurta ama xudunta?
« Reply #1 on: August 23, 2013, 11:52:29 PM »
Xudunta oo dheecaan ur leh ka socdo ma ahan wax sahlan ee la xiriir takhtar sida ugu dhakhsiyaha badan, waxay noqon kartaa infekshan ay qaaday ama in caloosha ay ku furan tahay oo fistula samaysatay.
Mida labaad, maxaa u la jeedaa mani yari, ma biyaha ayaa yar mise shahwada biyaha ku jirto tira koobkeeda ayaa yar?
« Reply #2 on: September 02, 2013, 01:56:58 PM »
Waxaan u jeedaa Biyaha ayaa yar. ee Maaha xajmiga ku jira.......
maxaa keena inuu biyaha uu yaraado?
maxaa lagula tacaaalaa inuu biyuhu bato?
« Reply #3 on: November 05, 2013, 12:33:26 PM »
Fadlan mida mani yarida la xiriir takhtar si loo baaro biyaha.
Shahwada waxaa jiro cabiro laga rabo in ay keento hadii ay noqoto tayada, cabirka, xajmiga iyo waxyaabo kale, kadib ayaa laguu sheegi karaa dhibka meesha uu ka jiro.
Views: 11556 August 13, 2010, 03:34:13 PM
Views: 17309 October 27, 2012, 09:40:12 PM
Views: 15661 September 04, 2011, 04:19:01 AM
Views: 13978 October 02, 2010, 08:11:06 AM
Views: 39503 February 24, 2011, 10:54:29 AM